रुपन्देहीबाट पनि १० संक्रमित निको भएर घर फर्किए- समाचार - कान्तिपुर समाचार
रुपन्देहीबाट पनि १० संक्रमित निको भएर घर फर्किए
तिलोत्तमा — शनिबार रुपन्देहीको बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालबाट एकैसाथ १० जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । निको भएका उनीहरू सबै कपिलवस्तुका हुन् ।
दुई साताअघि अस्पताल भर्ना भएका संक्रमितको लगातार दुई पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पर्सन तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले बताए ।
'बिरामी निको भएर पठाउँदा खुसी लागेको छ', उनले भने, 'आत्मबल बलियो राख्ने र अपनाउनुपर्ने नियममा ख्याल गरे कोरोनालाई जितिन्छ ।'
निको भएर जानेहरुले ‘कोरोनाबाट डराउनुपर्दैन, सजिलै जित्न सकिन्छ’ भन्ने सन्देश पनि दिएको उनले बताए । थापाका अनुसार अहिले अस्पतालमा ८ जना नयाँ बिरामी थपिएका छन् । धागो कारखानाको कोरोना अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको संख्या ३४ छ ।
यसअघि रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका २५ वर्षीय युवा निको भएर घर गइसकेको छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ २०:४३
रूपन्देही — कोभिड–१९ संक्रमणबाट उपचारकै क्रममा बिहीबार मृत्यु भएका गुल्मीका शिक्षकको सम्पर्कमा रहेका अर्का एक जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
रूपन्देहीको मणिग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालमा उपचाररत गुल्मीको मदाने गाउँपालिका–६ का शिक्षकमा जेठ ५ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । उनको नजिकको सम्पर्कमा रहेका अर्का एक पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो । शिक्षकको सम्पर्कमा देखिएका उनको जेठ ५ गते नै थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको थियो । भैरहवास्थित प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भएको परीक्षणमा उनमा पनि संक्रमण देखिएको प्रदेश प्रयोगशाला प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए ।
शिक्षकको सम्पर्कमा रहेका ६९ जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गरिएको थियो । अन्यको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । मदाने गाउँपालिका अन्र्तगतको कार्यालयमा कार्यरत उनी कर्मचारी हुन् । उनी दाङ जिल्लाका रहे पनि लकडाउनको अवधिमा मदाने बाहिर गएको नदेखिएको मदाने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ २०:३२